Godin: Garashada vs Falanqaynta | Martech Zone
Arbaco, Juun 26, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Seth wuxuu weydiyaa su'aal weyn oo inta badan muran ka taagan Maareeyayaasha Wax soosaarka Software…. Miyaad raacdaa Garaadka ama Falanqaynta?
Aragtideyda shakhsiga ah ee tan ayaa ah in adiga ay tahay isku dhafka jilicsan ee labada. Markaan kafekero falanqaynta, waxaan ka fakaraa xogta. Waxay noqon kartaa xog la xiriirta tartanka, isticmaalka, jawaab celinta, ilaha, iyo wax soo saar. Dhibaatada jirta ayaa ah in gorfaynta ay si weyn ugu tiirsan tahay taariikhda, ee aysan ku xirnayn hal-abuurnimo iyo mustaqbalka.
Intii aan ka shaqeynayay warshadaha kale ee warbaahinta, waxaan u arkay falanqaynta inay fure u tahay go'aannada oo dhan. Tani waxay ahayd dhif hal-abuurnimo. Hogaamiyaasha warshadaha waxay si fudud u indha indheeyeen joornaalada warshadaha waxayna sugeen ilaa qof kale sameeyo wax cadeyn wanaagsan ah â ?? markaa waxay isku dayi lahaayeen inay korsadaan. Natiijadu waa warshad dhimatay oo hal-abuurnimo ku yar tahay.
Dareenka, dhinaca kale, wuxuu noqon karaa mid khiyaano badan. Go'aan gaarista adigoon si buuxda u falanqeyn xogta oo aad fikraddaada kala hadlin khabiiro kale ama macaamiil waxay noqon kartaa khatar aad u weyn. Aragtida macaamilku aad ayey uga duwan tahay tan adeeg bixiyaha. Marka - ku-guuleysiga adeeg-bixiyaha ee sameynta moodaa go'aamadu waxay miisaan culus ku leeyihiin awooddooda wax u akhrinta suuqa. Is-afgarad waa qaab khatar ah sidoo kale. Si aan u sheegno Quusasho.com:
â A Dhowr jajab oo aan waxyeello lahayn oo wada shaqeynaya ayaa soo saari kara daadad badan oo halaag ah.
Waxaan u maleynayaa inay dhammaantood ku soo dhacayaan 'halista dabeecaddaada' ???. Intee in le'eg ayaad halis u tahay adiga ama ururkaaga inaad diyaar u ahaato inaad garato iyo / ama gorfayntaada. Haddii aad had iyo jeer si ammaan ah ugu ciyaareyso, qof ayaa ku dhaafi doona adiga oo iibsanaya oo doonaya inuu qatar galiyo. Haddii aad had iyo jeer khatar gelinaysid, fursadaha fashilka masiibada ayaa dhow.
Marka la soo saarayo alaabada, waxaan aaminsanahay in falanqeyntu ay qaadan karto caqli galinta, illaa inta halisteeda iyo qiimaheeda si sax ah loo go'aaminayo. Khatar sare, oo leh qiime sare waxay mudan tahay tixgelin. Khatar sare, qiimo hooseeya ayaa kuu horseedi doonta dhimashadaada. Maareynta halista ayaa fure u ah go'aan qaadashada saxda ah. Maareynta halista waa inaan lagu jahwareerin inaadan qatar galin, in kastoo!